I-Princess Cruises isika i-Australia ne-New Zealand kude kube nge-27 Januwari 2022
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » I-Princess Cruises isika i-Australia ne-New Zealand kude kube nge-27 Januwari 2022
Iindaba zase-Australia eziQhekezayo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukubambisa • Iindaba eziNtsha zaseNew Zealand • iindaba • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
I-Princess Cruises iyaqhubeka nezicwangciso zokuqhubeka nokuhamba ngenqanawa eMelika
Iindaba ezimbi ziyaqhubeka kumzi mveliso wokuhamba ngeenqanawa kunye nabakhweli e-Australia okanye eNew Zealand, okanye abo bafuna ukubandakanywa phantsi kohambo lokuhamba ngenqanawa bayaqhubeka, ubuncinci kude kube nguJanuwari 27. Ithetha ukuba akukho kuhamba ngenqanawa ukuya nokubuya e-Australia naseNew Zealand kwiPrincess. Iinqanawa kunye nabanye abaninzi.
Princess Cruises Yandisa ikhefu layo kwiiholide zokuhamba ngenqanawa e-Australia / eNew Zealand ukuya kuJanuwari 27, 2022,
Oku kungenxa yokungaqiniseki malunga nokubuya kokuhamba ngenqanawa kummandla.
Ngenxa yokwandiswa kwekhefu, uhambo lweCoral Princess ngoJanuwari 17 luye lwacinywa kwaye iRoyal Princess kunye neSapphire Princess zonyaka zarhoxiswa.
"Kwacaca ukuba asizokwazi ukuhambisa ukuthunyelwa okucwangcisiweyo kweRoyal Princess kunye neSapphire Princess e-Australia ngaphambi kokuba baqale uhambo lwabo olupapashiweyo lwasenyakatho," utshilo uDeanna Austin, iGosa eliyiNtloko lezoRhwebo ePrincess Cruises. "Siyaqonda ukuba iindwendwe ezicwangcisa uhambo ngenqanawa ngexesha leholide lasehlotyeni kunye nakunyaka omtsha zizakuphoxeka ngotshintsho, nangona kunjalo, besifuna ukunika iindwendwe isaziso kangangoko ukuze zikwazi ukucwangcisa iiholide zazo ngokuqinisekileyo."
Kwiindwendwe ezibhukishe kulwandle olurhoxisiweyo, iindwendwe zinokhetho lokuhamba ngenqanawa efanayo. Inkqubo yokubhala kwakhona iya kuba nesibonelelo esongeziweyo sokukhusela iindleko zeendwendwe kuhambo lwabo lokukhwela inqanawa. Ngaphandle koko, iindwendwe zingakhetha ikhredithi yokuhamba ngenqanawa (i-FCC) elingana ne-100% yendlela yokuhamba ngenqanawa ehlawulelweyo kunye nebhonasi eyongezelelweyo engabuyiswayo ye-FCC elingana ne-10% yendlela yokuhamba ngenqanawa ehlawulelweyo (ubuncinci beedola ezingama-25 zeedola) okanye imbuyiselo epheleleyo kwinto yoqobo uhlobo lwentlawulo.
IPrincess izakukhusela ikhomishini yearhente yokuhamba ngokubhukisha okuhlawulwe ngokupheleleyo kuthathelwa ingqalelo indima ebalulekileyo abayidlalayo kwishishini lomzila wenqanawa nakwimpumelelo.
Olona lwazi langoku kunye nemiyalelo yeendwendwe ezibhukishelwe zichaphazelekile koku kurhoxiswa, kunye nolwazi oluthe kratya kwiFCCs kunye nembuyiselo yemali, inokufumaneka kwi-Intanethi Iinkcukacha ngeeNdawo eziChaphazelekileyo nezirhoxisiweyo.